ယွန်းယွန်းကြောင့် အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလပြဿနာ စတတ်ပြီး နောက်ကြောင်းပါ အဖော်ခံနေရပီဟေ့ – XB Media & News
ယွန်းယွန်းကြောင့် အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလပြဿနာ စတတ်ပြီး နောက်ကြောင်းပါ အဖော်ခံနေရပီဟေ့
မနေ့ညက အုပစြိုးခနြ့တငတြဲ့ My Day နဲ့ ခငဇြာခှညကြွောြ့သား ဘုနြးမငြးနလတေငတြဲ့ My Day လေးအကှောငြး 😶 ယှနြးယှနြးနဲ့စညသြူဝငြး ခိုးဖောကပြှနတြာ သိရတဲ့ စာတှဖတေပြီး
ယှနြးယှနြးနဲ့ ရညြးစားဖှဈခဲ့ဖူးတဲ့ အုပအြုပကြ သူနဲ့ဖှဈခဲ့ဖူးတဲ့ကောငမြလေးက ဒီလိုကှီး ပါလား ငါနဲ့ပှတတြာ ကံကောငြးတယဆြိုပီး ဘုရား သခငကြိုကွေးဇူးတငလြိုကကြှောငြး My Day မှာတငြ လိုကပြါတယြ …
စာတှရှညေလြို့ ပုံလေးတှထေောကြ ကှညြ့ပီး ဆကဖြတတြော့နောြ
ဘုနွးမငွးနလဟော အကယဒွမီ ခငဇွာခှညကွှောွ့သား ဖှဈသလို မှတံခှနွ အောငသွနွးဆုထီဆိုငပွိုငရွှငရွဲ့သား လဲ ဖှဈပါတယွ .
အဖနေဲ့အမကေ သူငယငွယကွတညွး က ကှဲနပမယွေေ့ ဖခငဖွှဈသူက သူ့သားကို ယခုအခှိနွ ထိလိုလသေေးမရှိ မုနိ့ဖိုးပေးနလေို့ အေးအေးလေးနဲ့ ဆွိုးနတေဲ့ ကုတကွမငွှးလေးအဖှဈ လူသိမှားပါတယွ .
ဘလုတကွငွးဖရမမွီ ကကှီးပှငွးလာသူမလို့ အခစှကွို အယုံအကှညမွရှိပါဖူး . သူဟာ ယှနွးယှနွးနဲ့လဲ ငယစွဉွ ကတညွးက သူ့အမေ ရှုတငတွှနေောကလွိုကရွငွး ရငွးနှီးခဲ့ပါတယွ .
သူ့အကူအညီနဲ့ အုပစွိုးခနွ့ ဆိုတဲ့ သငွကြှနသွီခငွှးမှာ ယှနွးယှနွးသရုပဆွောငပွေးဖို့ ပှောလို့ ယှနွးယှနွးက သရုပဆွောငပွေးခဲ့တာပါ
ဟနလွေးကလဲတခှားသူမဟုတပွါဖူး . ဟနလွေးက အနုပညာလောကထဲ ဝငပွီးပီးခငွှး မောဒွယအွောငလွေး နဲ့တရားဝငွ နှဈအတော တွောကွှာတှဲခဲ့ပါသေးတယွ .
ဟနလွေးတို့ တှဲနတေုနွး Cele Cele Small Page က မူဆယမွှာ ဟနလွေးယောငွကြှားရှိပီး ကိုယဝွနဖွကှခွဖှူး ကှောငွး သကသွပေုံတှနေဲ့တငလွိုကတွဲ့အတှကွ အောငလွေးက လမွးခှဲခငှနွတောကှာပါပီ
သို့ပမယွေ့ လဲ ဟနလွေးအတိတတွငတွဲ့ Cele Cele Small Post အောကမွှာ ” သူ့မှာ ကနှောနွဲ့မတှေ့ခငွ ဘာအတိတွ ပဲရှိခဲ့ ရှိခဲ့ ကနှောကွတော့ ဆကခွစှနွမှောပါ ” လို့ Comment ဝငရွေးခဲ့လို့ Cele Cele Small ကလဲ ” တကယဟွုတပွါစနေောွ .
ဆယစြောငြ့ကှညြ့နမယြေ ဒီမနြ့ကို Ss ရိုကထြားလကတြယနြောြ . အိုခီ.. .ဟုတြ ကွိုငြးဇူးပါစငြ့ ” လို့ Reply ပှနပြီး ခွပခေဲ့ပါတယြ . သိပမြကှာပါဖူး သူတို့ တကယြ ကှဲသှားပါတယြ
ဒီကိစ္စလေးရောသိပီးကြပီလားဟင် မနေ့ညက အုပ်စိုးခန့်တင်တဲ့ My Day နဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော့်သား ဘုန်းမင်းနေလတင်တဲ့ My Day လေး အ ကြောင်း ယွန်းယွန်းနဲ့စည်သူဝင်း ခိုးဖောက်ပြန်တာ သိရတဲ့ စာတွေဖတ်ပီး ယွန်းယွန်းနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အုပ်အုပ်က သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးက ဒီလိုကြီး ပါလား ငါနဲ့ပြတ်တာ ကံကောင်းတယ်ဆိုပီး ဘုရား သခင်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ကြောင်း My Day မှာတင် လိုက်ပါတယ် …
စာတွေရှည်လို့ ပုံလေးတွေထောက် ကြည့်ပီး ဆက်ဖတ်တော့နော် ဘုန်းမင်းနေလဟာ အကယ်ဒမီ ခင်ဇာခြည်ကျော့်သား ဖြစ်သလို မြတံခွန် အောင်သန်းဆုထီဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သား လဲ ဖြစ်ပါတယ် .
အဖေနဲ့အမေက သူငယ်ငယ်ကတည်း က ကွဲနေပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့သားကို ယခုအချိန် ထိလိုလေသေးမရှိ မုနိ့ဖိုးပေးနေလို့ အေး အေးလေးနဲ့ ဆိုးနေတဲ့ ကုတ်ကမျင်းလေးအဖြစ် လူသိများပါတယ် . ဘလုတ်ကင်းဖရမ်မီ ကကြီးပြင်းလာသူမလို့ အချစ်ကို အယုံအကြည်မရှိပါဖူး .
သူဟာ ယွန်းယွန်းနဲ့လဲ ငယ်စဉ် ကတည်းက သူ့အမေ ရှုတင်တွေနောက်လိုက်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ် . သူ့အကူအညီနဲ့ အုပ်စိုးခန့် ဆိုတဲ့ သြင်္ကန်သီချင်းမှာ ယွန်းယွန်းသရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ပြောလို့ ယွန်းယွန်းက သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ ဟန်လေးကလဲတခြားသူမဟုတ်ပါဖူး .
ဟန်လေးက အနုပညာလောကထဲ ဝင်ပီးပီးချင်း မော်ဒယ်အောင်လေး နဲ့တရားဝင် နှစ်အတော်တော်ကြာတွဲခဲ့ပါသေးတယ် . ဟန်လေးတို့ တွဲနေတုန်း Cele Cele Small Page က မူဆယ်မှာ ဟန်လေးယောင်္ကျားရှိပီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖူး ကြောင်း သက်သေပုံတွေနဲ့တင်လိုက် တဲ့အတွက် အောင်လေးက လမ်းခွဲချင်နေတာကြာပါပီ .
သို့ပေမယ့် လဲ ဟန်လေးအတိတ်တင်တဲ့ Cele Cele Small Post အောက်မှာ ” သူ့မှာ ကျနော်နဲ့မတွေ့ခင် ဘာအတိတ် ပဲရှိခဲ့ ရှိခဲ့ ကျနော် ကတော့ ဆက်ချစ်နေမှာပါ ” လို့ Comment ဝင်ရေးခဲ့လို့ Cele Cele Small ကလဲ ” တကယ်ဟုတ်ပါစေနော် . ဆယ်စောင့်ကြည့်နေမယ် ဒီမန့်ကို Ss ရိုက်ထားလက်တယ်နော် .
အိုခီ.. .ဟုတ် ကျိုင်းဇူးပါစင့် ” လို့ Reply ပြန်ပီး ချေပခဲ့ပါတယ် . သိပ်မကြာပါဖူး သူတို့ တကယ် ကွဲသွားပါတယ် အခုလို ဝင်ရောက်ဖ တ်ရှု့ပေးကြတဲ့ တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကျပါစေ။
Post Views: 64,217
မိခင်ကြီးအချစ်ပိုရလောက်အောင် မိခင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့ ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်